Ny rindranasa dimy tsara indrindra hianarana mihira amin'ny Android | Androidsis
Betsaka ny olona tia mihira ary maniry ny ho afaka mampihatra an'ity hetsika ity matetika. Na te-ho afaka hampiofana ny feony izy ireo mba hitrandrahana tsara izany. Saingy, tsy azo atao foana ny mianatra, na amin'ny fotoana na amin'ny vola. Soa ihany fa afaka manampy antsika ny findaintsika Android, toy ny mahazatra. Satria misy ny rindranasa ahafahantsika mianatra mihira.
Ireo dia fampiharana izay izy ireo dia afaka manampy antsika hanatsara ny teknika na hianatra fomba fihirana vaovao. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mahita raha tena hetsika mahaliana anao izany ary mahita ny fomba tsara indrindra hanararaotana ny feonao. FANARAHANA avelanay ianao miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra ho an'ny Android amin'ity sokajy ity.
Hita amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play izy rehetra. Noho izany dia tena mora ny mahazo azy ireo amin'ny fitaovantsika. Noho izany dia afaka midina miasa isika ary manomboka manao fanazaran-tena ao an-trano isaky ny maniry.
1 BOKY Aural ho an'ny ABRSM Kilasy 1
2 Fanafana ny feo 7 Minitra
3 Mianara mihira | Lesona momba ny feo
4 Lesona Vocaberery Mpampianatra Mihira Vocal
5 SWIFTSCALES - Mpanazatra Vocal
BOKY Aural ho an'ny ABRSM Kilasy 1
Mpampianatra mozika ity app ity. Ka hanomana antsika amin'ny fomba maro izany fa tsy amin'ny feo fotsiny. Satria koa a fanampiana be dia be hampandrenesana ny sofina, lafiny iray tena ilaina rehefa te hihira. Safidy tsara izany raha miomana bebe kokoa amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny mozika. Mifanena aminao izahayfampihetseham-batana maro karazana izay mikasa hanatsara ny fihainoantsika.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Fanafana ny feo 7 Minitra
Ny fanafanana ny feo dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra ho an'ireo mpihira. Hatramin'izany fomba izany no ahazoantsika antoka fa ny feo dia ao anatin'ny fepetra tsara indrindra. Ho fanampin'ny fanampiana amin'ny fisorohana olana ara-peo. Saingy, zava-dehibe ny fanaovan'io fanafana io tsara. Na amin'ny resaka faharetana na ny fanazaran-tena tokony hatao. Noho izany, ity fampiharana ity dia fanampiana tsara ho an'ity. Manampy antsika hanafana ny feontsika isan'andro amin'ny fanazaran-tena tsotra izay maharitra 7 minitra.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay.
Mianara mihira | Lesona momba ny feo
Mitodika any amin'ny rindranasa natao hanombohana manao fampiharana mivantana izahay. Ity rindranasa ity dia hanampy antsika hampiasa betsaka ny feontsika. Ankoatry ny fahaizana mahita sy mahafantatra ireo teknika fihenam-peo samihafa. Amin'ity fomba ity dia hihira tsara kokoa isika, saingy hataontsika ihany koa izany nefa tsy hiteraka fahasimbana amin'ny tadim-peontsika, zavatra iray tena lehibe. Ny fampiharana dia hanome antsika hevitra momba ny feontsika miaraka amin'ireo lafin-javatra hatsaraina. Ka afaka hitantsika izay tsy nahombiazantsika.
Riyaz - Mianara mihira. Ampiharo izay hira na lesona rehetra
Lesona Vocaberery Mpampianatra Mihira Vocal
Fampiharana iray hafa an'ny fomban'ilay teo aloha izay hiasa ho mpampianatra mpihira antsika. Ka mila mihira sy manatsara ny teknikanay isika. Ny interface amin'ity rindranasa ity dia miavaka noho izy tena mora ampiasaina, zavatra izay tsy isalasalana fa manohana azy betsaka. Ho fanampin'izany, mahita asa maro isika, satria mandrefy ny naoty azontsika rehefa mihira ary manome vaovao be dia be ho antsika momba izay ataontsika sy ny fivoarantsika.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Fa misy fividianana sy dokam-barotra ao anatiny.
Mianara mihira miaraka amin'i Vocaberry. Lesona mihira
SWIFTSCALES - Mpanazatra Vocal
Hofaranantsika amin'ny iray amin'ireo ny lisitra fampiharana feno kokoa izay mety ho hitantsika rehefa mianatra mihira. Safidy mety indrindra ho an'ny olona izay efa mianatra na natokana ho an'ny mozika. Satria tena feno sy matihanina izy io. Manampy antsika hampiofana ny feo sy hanafana azy io. Ho fanampin'izany, mamela antsika hamorona mizana isika ary koa manolotra safidy fanamboarana maro. Azontsika atao ihany koa ny mamonjy izay rehetra ataontsika amin'ny fampiharana.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny rindranasa tsara indrindra hianarana mihira amin'ny Android